ब्राजिल : राष्ट्रपतिमा बोल्सोनारु निर्वाचित
October 29, 2018 Subas B.K0
बिबिसी । ब्राजिलको राष्ट्रपतीय चुनावमा उग्र–दक्षिणपन्थी उम्मेदवार जइर बोल्सोनारु विजयी भएका छन् । लगभग सबै मतगणना भइसक्दा बोल्सोनारुले ५५ प्रतिशत मत हासिल गरेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी वर्कर्स पार्टीका फर्नान्डु अडाडको पोल्टामा चाहिँ ४५ प्रतिशत मत परेको छ । चुनावी अभियानका क्रममा बोल्सोनारुले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र अपराधको दर घटाउने वाचा गरेका […]
October 29, 2018 October 29, 2018 Rijan Bhujel0
October 28, 2018 Subas B.K0
विश्वकै सर्वाधिक सफल दुई फुटबल क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीच भएको एल क्लासिकोमा बार्सिलोनाले ५ गोल गर्दै रियलमाथी विजयी भएको छ । खेलको पहिलो हाफबाट नै दवाब सिर्जना गर्दै कउटिन्होले गोलको खाता खोले भने लुइस स्वारेजले पेनाल्टीको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै बार्सिलोनाले पहिलो हाफबाट नै २ गोलको अग्रता बनाइराख्यो । त्यसैगरी खेलको दोस्रो हाफमा रियलको तर्फबाट […]
आज रियल र बार्सा भिड्दै, मेस्सी र रोनाल्डोबिनाको एल क्लासिको कस्ले जित्ला ?
विश्वका सर्वाधिक सफल दुई क्लबबीचको बहुचर्चित भिडन्त आज राति हुँदैछ । दुई स्पेनिस क्लबबीचको भिडन्तका क्रममा नेपाली समयानुसार राति ठीक ९ बार्सिलोनाले रियल मड्रिडलाई क्याम्प नोउमा स्वागत गर्नेछ । यो पटकको एल क्लासिको पहिलो भन्दा खल्लो हुने चिन्ताले भने दुवै क्लबका समर्थकलाई पिरोलेको छ । यो चिन्ताको खास कारण हुन् बार्सिलोनाका लियोनेल मेस्सी र रियल […]
पोखरामा प्रदर्शन गरियो विश्वकप ट्रफी
October 27, 2018 Subas B.K0
पोखरा रंगशालामा आईसीसी वानडे विश्वकपको ट्रफी प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ट्रफी प्रदर्शनीमा नेपाली टोलीको प्रतिनिधित्व गरेका हुन । त्यसपछि कप्तान पारस खड्काले पनि ट्रफी उचालेर दर्शकमाझ ट्रफी प्रदर्शन गरेका थिए । पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) भइरहेको पोखरा रंगशालाको क्रिकेट मैदानमा ट्रफी प्रदर्शनी गरिएको हो । शनिबार बिहान […]
October 26, 2018 October 26, 2018 Subas B.K0
पोखरा । आजबाट शुरु भएको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी शुरुवात गरेको छ । पोखरा रंगशालामा शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा पोखराले विराटनगर टाइटन्सलाई ५८ रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो । १९८ रनको विशाल चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १३९ रन मात्रै बनाउन सक्यो । विराटनगरको सुरुवाती […]
October 25, 2018 Subas B.K0
नेपालकै सुन्दर नगरी पोखरामा भोलिबाट पोखरा प्रिमियर लिग खेल सुरु हुन गईरहेको छ । पोखरा रंगशालामा कार्तिक ९ देखि शुुरु हुुन गईरहेको क्रिकेट टि–२० को उद्घाटन खेल घरेलु टोली पोखरा पल्टन र बिराटनगर टाइटनबीच हुन गइरहेको छ । कात्तिक २० गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको सबै तयारी पुरा भएको छ । प्रतियोगिताका लागि फ्रेञ्चाइज टिमहरु पोखरा पल्टन, […]
स्वादको चक्करमा स्वास्थ्य बर्बाद ! जंक फूडले कसरी शरीरमा असर गर्छ ?
October 25, 2018 October 25, 2018 Amrit sunar0
अहिलेका पुस्ताको मेनुमा के कस्ता खानेकुरा छन् ? चाउचाउ, चाउमिन, मम, पिज्जा, बर्गर, स्याडविच इत्यादी । घरमा पकाइने खाजामा उनीहरु त्यती अभ्यस्त छैनन, जति बजारमा उपलब्ध तयारी खाजामा छन् । जब भोग लाग्छ, चाउचाउ खान्छन्, चाउमिन मगाउँछन्, पिज्जा खोज्छन् । यस्तो दिन हुँदैन, जुन दिन उनीहरुले यस्ता खानेकुरा नखाएका होस् । हरेक दिनजसो केही न […]
एजेन्सी – यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा बार्सिलोनाले इन्टर मिलानलाई २ –० ले पराजित गरेको छ । कप्तान लिओनेल मेसीबिना उत्रिएको बार्सिलोनाले खेलमा जित दर्ता गर्यो । खेलको सुरुवातमा इन्टरले केहि राम्रो अवसर सिर्जना गरेपनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकेन । सुरुवाती लयलाई निरन्तरता दिन नसक्दा इन्टरमाथि बार्सिलोना हावी हुँदै गएको थियो । […]
October 23, 2018 Amrit sunar0
चीनले समुद्रमा विश्वकै लामो पुल बनाएको छ । हङकङ, झुहाई-मकाउ नामको यो पुलको लम्बाइ ५५ किलोमिटर छ । चिनियाँ राष्टपति शी जिनपिङले मंगलबार उदघाटन गरेको यो पुललाई बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने छ । हङकङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट झुझाई पुग्न करिब चार घण्टा यात्रा गर्नुपर्छ, तर अब यो पुलले चार घण्टाको दुरीलाई केबल ४५ मिनेटमा छोट्टाइदिएको […]
युट्युबमा भिडियो हालेर अर्बौं कमाउँछन्, २७ वर्षीय डेनियल रोबर्ट मिडलटन
October 22, 2018 Amrit sunar0
फुर्सदको समयमा रिफ्रेस हुन र विभिन्न सूचनाको लागि विश्वभरका मानिसले भिडियो सेयरिङ साइट युटयुबको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यही युट्युबबाट कैयन युट्युबरले करोडौं पैसा कमाइरहेका छन् । युट्युब भनेको भिडियोहरु हेर्नको लागि मात्रै हो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तर, युट्युबमा सिर्जनात्मक भिडियोहरु राखेर अथाह पैसा पनि कमाउन सकिन्छ । त्यसको उदाहरण हुन बेलायतका […]
October 20, 2018 Rijan Bhujel0
October 8, 2018 Rijan Bhujel0